RIKOOOO MD11 NA 777 n'iyi
ajụjụ RIKOOOO MD11 NA 777 n'iyi
1 afọ 11 ọnwa gara aga #599 by suythe
M a na-eji Rikooo A330 na ya wonderfull, ma na-adịbeghị anya m gbalịrị ụfọdụ ndị ọzọ na ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka MD-11 na 777
Ndị na ngwaahịa na-n'iyi ozugbo airborne. ma ọ bụrụ na m na-eme ụfọdụ manuveors P3D ga-adaru.
Olileanya na m ga-esi ụfọdụ ngwọta a.
Daalụ natara: 44
1 afọ 11 ọnwa gara aga #600 by Dariussssss
Hello e na ịnabata aka Rikoooo.
M na-eji ha niile na FSX, na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ị ga-n'aka na ụgbọ elu gị na-eji na-dakọtara na gị P3D. Mgbe ị mepee page nke, ka na-ekwu-MD-11, ị ga-ahụ nke a: N'ihi na FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 nwalee), otú i nwere iji jide n'aka na ọ bụ dakọtara.
Dị nnọọ ka ọ na-ekwu, v2 na v3 nwalee, njehie bụ nnọọ ekwe omume.
Olileanya a na-enyere.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: suythe
Oge ike page: 0.204 sekọnd